Wargeys sheegay in Qarixii Zoobe uu kadambeyeey Askari horey uga Tirsana Ciidamadda Dowladda – Radio Daljir
Wargeys sheegay in Qarixii Zoobe uu kadambeyeey Askari horey uga Tirsana Ciidamadda Dowladda
Oktoobar 18, 2017 6:49 b 0
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalladda London ayaa shalay qoray Warbixin dheer oo ku aadan cidda fulisay Qarixii ay dadka badan ku geeriyoodeen ee Sabtidii la soo dhaafay ka dhacay Isgoyska Zoope ee magaalladda Muqdisho.
Wargeyska waxa uu tilmaamay in Saraakiisha baaraya Weerarkaasi lagu dilay in ka badan 300 qof ayaa rumeysan in Qaraxaasi ahaa mid looga aar-goosanayey Hawlgalladdii ay Milliteriga Maraykanka hoggaaminayeen ee ay bishii Augost ka fuliyeen Deegaanka Bariire.
Wargeyska The Guardian ayaa ka soo xigtay Saraakiil ku sugan gudaha Somalia in Ninkii geystay Qaraxaasi uu ahaan Askari ka tirsanaa Milliteriga Somalia, kaasi oo Deegaan ahaan ka soo jeeda.Degaanka Bariire oo ay 2 bilood ka hor weerareen Ciiddanka DFS iyo kuwa Khaaska ee Marakanka, halkaasi oo lagu dilay 10 qof oo rayid ahaa.
Saraakiisha la hadashay Wargeyska The Guardian ayaa sheegay in Askarigii fuliyey Qaraxaasi uu ku soo biiray Ciiddanka Milliteriga Somalia sannadkii 2010-kii, kadibna uu ku biiray Alshabaab abaarihii 2012-kii, waa sida uu qoray Wargeyskaasi.
Saraakiisha waxay intaasi ku dareen inuu Dareewalkaasi horey ugu lug lahaa weeraro ka dhacay gudaha magaalladda Muqdisho oo uu ka mid ahaa Qarixii lala beegsaday Hoteelka Jazeera sannadkii 2012-kii, oo ay 8 qof ku geriyootay.
Dhinaca kale, Wargeyska The Guardian ayaa qoray inay Saraakiisha sheegeen inay 2 gaari ku lug lahaayeen qaraxaasi, mid ahaa Toyota NOAH iyo Gaari aad u weyn oo lagu soo raray qiyaastii 450 KG oo ah Qaraxyadda Ciiddamadda iyo kuwa lagu farsameeyo guryaha, waa sida hadalka loo dhigay.
Wargeyska waxa kale oo uu qoray inuu Hadafka Weerarka ee Gaariga Weyn uu ahaa in lala maaganaa Dhismayaasha sida aadka loo ilaaliyo ee Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, halkaasi oo ay deggan yihiin QM, inta badan Safaaradaha iyo iyadoo ay ku yaallaan Xarunta Dhexe ee 22,000 ee Askari ee ka tirsan Hawlgalka AMISOM.
Xildhibaan Katirsan Barlamaanka Somaaliya oo ku Geeriyooday Dalka Hindiyaa